Crunched: Iplatifomu yokuNika iNgcaciso ekunceda ukuba uthengise | Martech Zone
Ukuqhekeka: Iplatifomu yokuBonisa ekunceda ukuba uthengise
Lwesine, Okthobha 4, 2012 Douglas Karr
Ukuqhekeka yintlanganiso ye-intanethi kunye neqonga lokubonisa elilungiselelwe ukuthengisa. Ukukhuphisana ngokuthe ngqo nabantu abanjengoWebEx kunye neGotoMeeting, iCrunched iyenze lula inkqubo ngokuba nenkqubo egxile kwintlanganiso, ukulandelela kunye nokwabelana ngefayile, intetho okanye isikrini sakho kwiphepha lewebhu. Akukho software yomntu onokuyikhuphela kunye nokuseta… dibana nje uye kwi-URL yentlanganiso emiselweyo!
Ukuchithwa kunika ezi zinto zilandelayo:
dibana -Qala iinkomfa zewebhu ngaphandle kwesoftware yokufunxa umphefumlo. Iakhawunti iza ne-URL yobuqu kunye nenombolo yenkomfa.
Dibanisa -Nxibelelana ngakumbi nabathengi. Ngaphandle kwengxoxo, unokujonga kwakhona iprofayili yentlalo yomntu obekho kunye nolwazi lwendawo.
isipho Lawula kwaye ubonise iidesika okanye wabelane ngescreen sakho. Iqela lakho lokuthengisa linokwabelana kwaye lirekhode iintetho ngokunjalo!
umkhondo -Iintetho ze-imeyile ezisebenzisa ii-link ezinokulandeleka, jonga ukuba ngubani ofundayo kunye nexesha elingakanani
Bambisana - Yabelana ngentetho, iintlanganiso, amanqaku kunye ne-imeyile kunye neqela lakho ukuze wonke umntu ancede ekuqhubeni isivumelwano
Amaqela athengisayo angabelana ngentetho kwaye ajonge iimetrikhi kubo bonke abasebenzi bokuthengisa. Oku kunokuveza ulwazi oluthile malunga nokuba yeyiphi umahluko wentetho onokuba phakathi kwabadlali abaphezulu kunye nabanye kwiqela lakho lokuthengisa.
tags: isoftware yenkomfacrunchedukufumana enye indlelaisoftware yokuthengisawebex engenye
I-infographic kunye neNtetho: Ukuvela kweNtengiso yeDijithali
Ngaba ibalulekile na: www okanye non-www